Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Jong Ho Bom as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic People’s Republic of Korea to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Jong Ho Bom as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Democratic People’s Republic of Korea to the Republic of the Union of Myanmar with residence in Yangon.
Mr. Jong Ho Bom was born on 30 July 1964. He graduated from the Faculty of Philosophy from the Kim Il Sung University in October 1989. Mr. Jong Ho Bom joined the Ministry of Foreign Affairs in 1992 and served in various capacities at the Ministry of Foreign Affairs of the Democratic People’s Republic of Korea. From June 2014 to December 2015, he served as Deputy Director-General of the Protocol Department at the Ministry of Foreign Affairs.
Dated. 23rd February 2016
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသည် မစ္စတာ ဂျုံဟိုဘွန်အား ရန်ကုန်မြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် အဆိုပြုလာခြင်းကို သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
မစ္စတာ ဂျုံဟိုဘွန်ကို ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ကင်မ်အီလ်ဆွန်း တက္ကသိုလ်မှ ဒဿနိကဗေဒဘာသာရပ်ဖြင့် ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ မစ္စတာ ဂျုံဟိုဘွန်သည် ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ စတင်ဝင်ရောက်အမှုထမ်း ခဲ့ပြီး၊ ရာထူး အဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်ရေးရာဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဖြစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်